Ankizy - Tsarabika
Misy entana 58 isa.
Koveta kely fampandrona zazakely, efa misy ireo fitaovana ilaina amin’ny fampandrona miaraka aminy. Toy ny fandefasana savony fanasana loha sy vatana. Ao ihany koa ny fitsapana hafanana, hitsapana ny rano ampiasaina. Mirefy 83.5sm ny halavany, 40sm ny velarany, ary 32sm ny ahavony.
Fandrina ho an’ireo zaza lahy kely izay mpakafia ny sary mihetsika « flasch Mcqueen”, tena miendrika fiara mihitsy ity fandrina ity. Mapahazo aina tsara ihany koa anefa ary vita avy amin’ny akora « Eva rigide » izay atokisana tsara. Mirefy 135sm ny lavany, 68 sm ny sakany, ary 68,3sm ny ahavony.
Fandrina misy rihana kely ho an’ireo zaza. Nafarana fa tsy vita avy eto an-toerana. Vita avy amin’ny hazo tena mahazaka tsara ry vy tsy mety arafesina. Mafy sy mateza. Afaka hitoeran’ny zaza anak 3, ary misy “tiroir de rangement” ihany koa ao ambany fandrina.
Ity indray ny « poussette bébé » amin’ilay tena raitra. Mety raha hitondrana ny zazakely mandeha mandritra ny fotoana maharitra, na eto andrenivohitra na miala kely ny tanàna. Misy loko mena, na manga. Maivana izy ity, ary mora raisina an-tanana ihany koa. Afaka atao « poussette, chaise, transat… » azo aforitra ihany koa, natao ho an’ny zaza 2 volana ka...